Ifektri Yeshaja Yemoto eyenziwe ngokwezifiso, Abakhiqizi nabahlinzeki - Dongguan Changsen Electronic Technology Co., Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ishaja Power Circuit Board > Amapharamitha Weshaja Yemoto
Izici nokusetshenziswa kwemikhiqizo yeshaja yemoto: 1) Unjiniyela wamukela ukwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, futhi ipharamitha yokukhipha kwamandla wesifunda izinzile ngokuqhubekayo ukuvimbela ukwehla kwamandla kagesi kungadala umonakalo empilweni yomkhiqizo. 2) Uma ucabanga ngokuqina kwayo , ibhodi lesifunda lizothenga izinto ezihlinzeka ngemikhiqizo efanelekayo, lenze ukuguga nokuhlola amahora angama-720 ngaphandle kokuphazamiseka, futhi liqinisekise kaningi ukuqina kwalo. Ibhodi lesifunda lizofakelwa ibhokisi lama-fuse othomathikhi, i-high-voltage noma i-short-circuit protection othomathikhi, futhi libuyisele ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha. 3) Ishaja isetshenziselwa imikhiqizo ye-elekthronikhi neyedijithali njengamaselula.
1.Car ishaja nemingcele:
I-5V2A ishaja yemoto okokufaka kwe-voltage 12V okukhipha i-voltage 5V ukushaja ngqo
2. Izici kanye izicelo zemikhiqizo yeshaja yemoto:
3. Ishaja yemoto Imininingwane Yokukhiqiza:
Iwaranti yeminyaka emibili nge isinxephezelo esiyisihlanu ngobunzima bethu
I-singleport ye-USB, imbobo ephindwe kabili ye-USB, imbobo emithathu ye-USB
Umsebenzi we-IC unika amandla nokuvikelwa okwanele
Ngaphezulu kwamanje, ukulayisha ngokweqile, ukuvota ngokweqile nokuvikelwa kwesifunda okufushane
1ï¼ ‰Ishaja inayo uphase isitifiketi sikazwelonke sobuchwepheshe, i-3C, isitifiketi se-CQC
Ibhodi lesifunda ligcwele ibhokisi elenzelwe i-acustom, anti-collision kanye ne-shockproof, kanye ne-PE bag-proofpackaging.
1ï¼ ‰Amashaja ajwayelekile atholakala esitokweni futhi angathunyelwa ngosuku olufanayo.
2ï¼ ‰Amashaja azoba khona itholakala ezinsukwini eziyi-7.
3ï¼, amanani zikleliswe ngokwenani lebhodi lesifunda eliphrintiwe.
4ï¼ ‰Ngokwezifiso imiyalo:
Inqobo nje uma usitshela izidingo zakho zokusebenza, i- onjiniyela bazokunikeza ngezixazululo zedizayini, intuthuko nezokukhiqiza. Singakwazi ukuklama kunoma yisiphi isimo nosayizi. Senze amashumi ezinkulungwane ze- ukwenza ngezifiso, futhi siyazi ukuklama nokukhiqiza izinto zikagesi ezidinga ubuchwepheshe kanye nokuvumelana. Ukukhiqizwa kwethu kungukukhiqizwa okuzenzakalelayo ngokuphelele imigqa, ingakunika ikhwalithi ezinzile nokusebenza okungaguquguquki kwe- imikhiqizo. Ukusungula ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside, obufanele ukugcina ukuzinza kwekhwalithi yomkhiqizo nobuchwepheshe bokulandelela Inkampani yethu isebenza kakhulu ngokwezifiso, kepha azikho ezenziwe ngomumo. Izithombe ezilapha ku-inthanethi zonke ziyisampula esizi-odile ukukhiqizwa kwamakhasimende.
7.Indlela yokulethwa kokukhokha
8.Isingeniso sezinsizakalo zebhodi lesifunda:
I-preme salemeeting izoxhumana ngenkuthalo namakhasimende ngemininingwane eningiliziwe, izidingo zamakhasimende, imingcele yemikhiqizo, amazinga wekhwalithi, ukuhlinzeka ngokubonisana, ukwamukela ama-oda ocingo kanye nama-imeyili oda, futhi inikeze ngezinsizakalo ezahlukahlukene ezilula nezinsizakalo zezezimali.
Amathegi ashisayo: Amapharamitha Weshaja Lemoto, elenziwe ngezifiso, iFektri, Abenzi nabahlinzeki